Puntland oo mamnuucday Universal TV in uu ka shaqeeyo gudaha Puntland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandPuntland oo mamnuucday Universal TV in uu ka shaqeeyo gudaha Puntland
March 5, 2017 Abdi Omar Bile Puntland, Somalia 0
Universal TV, ayaa ah taleefishinka loogu daawashada badanyahay ee Soomaalida, waxaana xaruntiisu kutaalaa magaalada London. [Xigashada Sawirka: Archive]
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa taleefishinka Universal ka mamnuucday in uu ka howlgalo goboladeeda, sida lagu sheegay bayaan.
Bayaanka oo ay soo saartay wasaaradda warfaafinta Puntland maanta oo Axad ah ayaa lagu sheegay in Universal TV laga mamnuucay in uu ka shaqeeyo gudaha Puntland.
Bayaanka dhexdiisa, Puntland ayaa Universal TV ku eedaysay in ay baahinayeen warar lidi ku ah ammaanka Puntland.
Puntland ayaa sidoo kale Universal TV ku eedaysay in ay faafinayeen warar been abuur ah oo gef ku ah shacabka Puntland.
Bartamihii sanadkii 2013-kii, wasaaradda warfaafinta Puntland ayaa sidan oo kale u mamnuucday Universal TV.
Universal TV, ayaa ah taleefishinka loogu daawashada badanyahay ee Soomaalida, waxaana xaruntiisu kutaalaa magaalada London.
March 5, 2017 Puntland suspends Universal TV for spreading fake news
November 7, 2016 Xasan Shiikh oo kasoo horjeestay in dowladda federaalka ay hurinayso dagaalka Gaalkacyo
March 19, 2017 Puntland oo munaasabad sagootin ah u qabatay shaqaalihii saarnaa markabkii ganacsi oo dhawaan ay sii daayeen burcadbadeedii afduubatay
Madaxweynaha Puntland oo odayaasha dhaqanka gobolka Bari kulan kula yeeshay magaalada Boosaaso
Dakhliga Wax Soo Saarka Soomaaliya oo kor u kacay 3.1 boqolkiiba sanadkan 2018
Nairobi-(Puntland Mirror) Dhaqaalaha Soomaaliya ayaa la filayaa in uu kor u kaco sanadkan 2018 iyada oo dalku kasoo kabanayo abaar taasoo dib u dhigtay wax soo saarkii beeraha, sida ay sheegtay haayada IMF maanta oo [...]
Puntland security forces arrests dozens of suspected terrorists in Bosaso port town
Bosaso-(Puntland Mirror) Puntland security forces have raided several villages in Bosaso on Saturday morning, government sources confirmed to Puntland Mirror The forces detained dozens of people over suspected links to terrorist groups. Those held were [...]
Labo nin oo afduubnaa oo lagu sii daayay Garoowe
Garoowe-(Puntland Mirror) Labo nin oo niman deegaanka ah ay Garoowe ku afduubeen bishii lasoo dhaafay ayaa lasii daayay, oday dhaqameed ayaa sidaa sheegay maanta oo Talaado ah. Labada nin ayaa ka yimid magaalada Burco ee [...]